पत्नी शोकमा परेका मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई मनोज गजुरेलको मर्मस्पर्शी संदेश… – पुरा पढ्नुहोस्……
पत्नी शोकमा परेका मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई मनोज गजुरेलको मर्मस्पर्शी संदेश…
काठमाडौं – वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठकी धर्मपत्नी यसोदा श्रेष्ठको ६७ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
लामो समयदेखि क्यान्सरबाट ग्रसित यशोधाको हरिसिद्धिस्थित क्यान्सर अस्पतालमा निधन भएको हो। उनको गए राति पौने ११ बजे उपचारको क्रममा अस्पताल मै मृत्यु भएको परिवारले बताएको छ। कलाकार मदनकृष्णले यशोदा सुबेदीसँग २०३० सालमा अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए।
उनको मृत्यु संगै उनका आफन्त सुभचिन्तक देखि कलाकार र उनका फ्यानले उनलाई सान्तोना दिन केहि न केहि लेखेका छन् ! यसै क्रममा हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले आफ्नो वेबसाइटमा “मृत्यू जीवनको अन्त्य हैन, अर्को ‘महाजिवन’को शुरुवात हो मदनदाई…” यो शिर्षकमा समबेदना दिदै यसो लेखेका छन् जुन तल पढ्न सक्नु हुन्छ ।
यसोदा भाउजु, तपाईं भौतिक रुपमा अब हामी बिच रहनु भएन ! प्रकृतिमा विलिन भएको तपाईंको भौतिक शरीरलाई हार्दिक श्रदान्जली । शोक सन्तप्त मदनदाई सहित सपरिवारमा समवेदना !
अस्तित्वमा समाहित भाउजुको आत्माले चाँडै शान्ति प्राप्त गरोस् । हाम्री गुरुपत्नी हुनुको नाताले मात्र हैन, एउटा उत्प्रेरक नारीकाे नाताले तपाईंलाई हामी कहिल्यै बिर्सने छैनौं ।
– तपाईंले अन्ध विश्वासले जकडिएको तत्कालिन‌ नेपाली समाजमा पनि अन्तरजातीय वैवाहिक जीवनलाई सहज र सफल बनाउनु भयो ।
– तपाईं आफूले घर परिवारको जिम्मा लिएर देशलाई मदनकृष्ण दाइजस्तो महान् मान्छे दिनु भयो ।
– क्यान्सरजस्तो ज्यानमारा रोगसँग लामो समयसम्म लडेर यही रोगसँग जुधि रहेकाहरुलाई बाँच्न प्रयास गर्ने उत्प्रेरणा दिई रहनु भयो ।
अन्त्यमा, मदन दाई, तपाईंआफैँ रोगसँग लडिरहनु भएको छ । त्यसमाथि पत्नीवियाेगकाे पिंडा थपिंदा तपाईं र तपाईंको परिवार कस्तो अवस्थाबाट गुज्रि रहेको छ, हामी अनुभुत गर्न सक्छौं । तर, मृत्यू जीवनको अन्त्य हैन अर्को महाजिवनको शुरुवात हो मदनदाइ ! याे‌ तत्त्वलाई बोध गरेर आफूलाई बलियाे बनाउनु होला । हामी सधैं भरी तपाईंको अभिभावकत्वको अपेक्षा गर्दछौं ।
तपाईंको सक्रियता, निरन्तरता र आत्मविश्वास नै यसोदा भाउजुको आत्मलाइ शान्ति दिने सही‌ उपाय हाे । सबैको मंगल होस्, सधैंको मंगल होस् । ॐ‌ शान्ती ! शान्ती ! शान्ती
Nextघाँटी रेटी महिलाको हत्या (हेर्नूहोस भिडियो सहितको यो रिपोर्ट)
चिनबाट श्रृखलाको अनुरोध : प्लीज! भोट गर्न कन्जूसाइँ नगरिदिनुहोला, सक्दो शेयर गरेर सबैसामू पर्याऊ।
पाकिस्तानले रिहाई गरेको लडाकु पाइलट अभिनन्दनलाई स्वागत गर्न हजारौं भारतीय वागा सीमामा खूशिले नाचगान -हेर्नुहोस (लाइभ भिडियो हेर्नुहोस)